Des étudiants ougandais créent une application mobile qui diagnostique la malaria - Afrikhepri Fondation
VAVO VANOSHESA VEVANHU
Isa plugin : Carta Icon inoda WooCommerce plugin kuti iiswe.
Mugovera, Nyamavhuvhu 8, 2020
Vadzidzi vekuUganda vanogadzira purogiramu yemunharaunda iyo inorwara marariya
Lkuongororwa ropa kwapera. Shanduko yedhijitari ikozvino inobvumidza kuongororwa ... ne-smartphone! Foni yekushandisa iyo inoongorora marariya ndeye kupenga kubeche kwevadzidzi vana vekuUganda vekuUkiyunivhesiti yeMakerere University (Kampala), inoshuma IPS.
Mumakore e21, Brian Gitta akawana zvirwere zvakawanda zveropa izvo zvaakagadzira chirwere chemasero, rinodaro nyaya yacho. Panguva yekupedzisira kwemarariya muna December 2012, anofanirwa kugara ari oga uye fungidzira "sachiremba rekurapa" inopa kukurumidza uye kusarwadziwa kuongororwa. Kana achangoporesa, anoshandisa purojekiti iyi uye ndiyo iyo iyo smartphone app Matibabu (iyo inoreva "chiremba" muchiSwahili) inoberekwa.
Marariya inorwara inopisa inoparadzirwa nemumhutu, inodaro nzvimbo yacho. IPS inofungidzira kuti nezve 42% yevanhu vekuUganda (34,5 mamiriyoni vagari) vanobatwa neparasite. Pasinei nekuderera kwakakosha kwenhamba yevakafa kubva kumarariya muAfrica, pakati pe70.000 ne100.000 vanhu vanofa gore negore munyika, maererano neNGO nhamba Malaria Consortium Uganda rakadzorerwa neshoko.
Chirwere chekushandisa chinogona kuona chirwere chepasimusi kunyange kusati kwatanga zviratidzo, inotaura nzvimbo. Mushandisi anoisa munwe wake mune imwe sarudzo yemutambo, "matiscope", yakabatana ne-smartphone, kuongorora masero ake matsvuku eropa, inotsanangura nyaya yacho. Kutenda mutsauko muhutano pakati pemasero ane utachiona uye masero ane utano, chigadziro chinogona kuona marariya pasina kutora ropa, inodaro IPS.
Rimwe ruzivo rwekushanda, maererano nesaiti: zvigumisiro zvinotumirwa zvakananga mumapepa ekuchengetedza kweMicrosoft kuti zvigoverwe pakarepo pamwe nechiremba wechiremba.
Maererano nemutungamiri wekliniki muKampala aibvunzurudzwa ne IPS, chikumbiro ichi chichabata marariya pamusana pekutanga, risati ringaita kukanganisika kwepfungwa kana zvimwe zvakasangana zvakadai seanemia. For the Vakadzi vane pamuviri, kunyanya vanotambura nechirwere chachoiyo ichadzivirirawo kutapudza.
Chirongwa chacho chinotarisirwa kurova mumusika mukati memakore maviri, inofanotaura imwe yevakiki. Ichava yakasununguka, asi matiscope ichadhura pakati peC20 nemadhora e35, chikamu chakakosha kune vazhinji vekuUganda, iyo inozivisa. Kunyanya kubva, sezvo nyanzvi yevana inonzi IPS inotiyeuchidza, marariya inobata vanhu vakawanda vari kumaruwa, avo vasingakwanisi kuwana mafoni uye Internet.
SOURCE: Slate Africa
Tarisa Upenyu hwaMiles Davis (2016)
Marcos Xiorro, muranda ari mu1821 anoronga kupanduka muPuerto Rico
Negro Nations uye tsika
Dzvanya pazasi kuti utaure
mitsva yekutsvaga mhinduromhinduro itsva kumashoko angu
Ndokumbirawo utarise kuti upindure
Newest Vazhinji Vanovhota
Mazuva 30 apfuura
Vadzidzi vekuUganda vanogadzira nharembozha inoongorora marariya.
PASI YENYAYA YAKO PAZVIRI
Dzvanya pazasi kutumira chinyorwa
GADZIRA ISHURE BHAIBHERI